Naqshad loogu talagalay macaamiisha ama naqshadeynta naqshadeeyayaasha? | Abuurista khadka tooska ah
Ustaad a aagga aqoonta Xaqiiqdii waa xaqiiqo lagu qanco qofka iyo wax badan oo intaas ka badan haddii tan ay xaqiijiso machad jaamacadeed ama jaamacad. Sikastaba, waa khibrad aad u xiiso badan iyo macnahaas, dhiirrigelinta ku dhaqanka aagga aan go'aansanay inaan xisaab celin kula sameyno waqtigeenna qiimaha badan. Dhab ahaantii, shahaado waa bilow waayo-aragnimo aan xad lahayn oo xitaa na siin karta wax-barasho ka badan tan aan ka helno jaamacadda.
Hadda, isku dhaca xaqiiqooyinka ayaa xambaarsan farqi ahaan, taas oo xaaladaha badankood, xoogaa qadhaadh noqon kara laakiin lagama maarmaan u ah xirfadeena xirfadeed. Ku saabsan yahay diyaarinta la siiyay iyo mida jaamacadu noo saadaalinayso iyo diyaar garowga ay wadadu na siiso (si aan u hadalno).
1 Maxaad doorataa
2 Xalku muxuu yahay? Maxaan ku qaban karnaa xaaladdan?
Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa dhibaatada ka dhex jirta jimicsi naqshadeynta garaafka waqtiga hawsha aan wadno iyo waqtiga qancinta dalabaadka macaamiisheenna. ¿Naqshad loogu talagalay macaamiisheena ama naqshadeynta naqshadeeyayaasha? Waxay ugu horreyntii tahay dhibaatada ka jirta qodobkan.
El xirfad yaqaan naqshadeynta garaafka wuxuu ku jiraa waqtigiisii ​​ugu horreeyay, shaqadiisii ​​ugu horreysay wuxuuna aad uga walaacsan yahay shaqooyinkiisa ugu horreeya ee uu qabto, maxaa yeelay ugu dambeyn waxaad codsan kartaa dhammaan aqoonta inuu hantay intuu tababarkiisa socday.
Markaad shaqeyso oo aad dirto macaamiisha, waxaad ogaataa in waqtiga intiisa badan, macmiilku wuxuu iska indhatiraa qawaaniinta naqshadeynta garaafka (Waxaa xijaabay naqshadeeyaha) iyo waxa uu runtii xiiseynayo inuu arko muuqaalkiisa oo laga soo qabtay shaashad ama warqad. Tanina halkan kuma eka, si fiican shirkadda lafteedu jawaab bay ka bixin doontaa tan ka hor.
"Macaamiilku waa KingWuxuu halheys u noqon doonaa shirkadda, ee raadinta soo jiidashada macaamiisha habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee ganacsigaaga. Tani, sida iska cad, kama jawaabi doonto qaab ku qanciya shaqada naqshadeeyaha, maxaa yeelay, markaa, waxay ku saabsan tahay muhiimadda qanacsanaanta macaamiisha, xitaa waxay ku saabsan tahay suurtogalnimada qanacsanaanta macaamiisha si looga takhaluso xuduudaha naqshadeeyaha, si loogu soo jiito macaamiil badan ganacsiga.
Xaqiiqadan sidaas uma fiicna naqshadeeye ugu dambayntiina aad ugu macaan macmiilka, waa hal sabab oo khilaafkani aad ugu adag yahay xirfadlaha. Way adkaan kartaa laakiin daruuri maahan meesha kaliya ee naqshadeeyayaashu u socdaan. Qeyb ahaan waa arrin aqbalaad iyo sidoo kale arrin dib u habeyn lagu sameeyo mabaadi'da naqshadeeyaha. Ku saabsan yahay ka fikir inta badan macaamiisha iyo ku qanacsanaantooda in ka badan sharciyadayada sida naqshadeeyayaasha. Si kooban, diirada saar dalabaadka macmiilkayaga iyo sida aan caqliga u lahayn ee kuwan ay noqon karaan, isku day inaad daboosho inta ugu macquulsan.
Marka laga eego dhinaca aragtida, waxay noqon kartaa mid aad u naxdin badan oo haa ah, iyadoo laga jawaabayo dalabaadka qof aan tixgelinaynin eraygeenna illaa heerka aan u aragno inuu faragelinayo waxay noqon kartaa mid daal badan.
Xalku muxuu yahay? Maxaan ku qaban karnaa xaaladdan?
Waa arrin ogaadaan sida loo qeexo macaamiisheennaWaxay ku saabsan tahay fahamkooda, iyaga oo u maleynaya inay iyagu yihiin kuwa si uun u xukuma qaab dhismeedka aragti ahaaneed ee u dhigma faahfaahinta naqshadaha, muhiim ah.
Tusaalaha tani wuxuu noqon karaa muusig haddii aan u ciyaareyno kuwa jecel birta culus, waxa ugu haboon ayaa ah inaan ku faraxno qayb wanaagsan oo ka mid ah noocyadan, inkasta oo aan khabiiro ku leenahay muusikada isla markaana aan ku weyn nahay dhaqankaas. taas ogow tani waxay aakhirka noo oggolaan doontaa inaan helno faa'iidooyin wanaagsan. Waxay markaa ku saabsan tahay ogaanshaha sida loola macaamilayo macaamiisha tirada badan, iyada oo loo marayo ogaanshaha dalabkooda iyo tixgelinta ku saabsan sheyga.
Naqshadeynta macaamiisheenna waxay noqon kartaa laylis wanaagsan taasna waa inaan ogaan doonno waxa ay doorbidida caadiga ah ee macaamiisheena. Waxaan la socon doonnaa kuwa aadka loogu qiimeeyo suuqeenna, annaga oo tixgelinayna in mar uun aan fursad u heli doonno inaan nafteena ku horumarinno sidii xirfadlayaal aan nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Naqshad loogu talagalay macaamiisha ama naqshadeynta naqshadeeyayaasha?
Waxaan kuugu hambalyeynayaa maqaalka, waxaan dhihi lahaa mid ka mid ah kuwa yar (haddii uusan kaligiis ahayn) ee dhigay DHAMMAAN lahjadaha (Waan ka xanuunsanahay dhex-dhexaadnimada waxyaabaha la qoro iyada oo aan faahfaahin yar laga helin xeerarka, gaar ahaan feisbul iyo tuitel). Laakiin haddii foomku aad u wanaagsan yahay, asalku ka wanaagsan yahay, maqaal aad u fiican, wuxuu nagu dhacay innaga oo dhan, wax ka wanaagsan oo ku habboon aragtidaada iyo tan macmiilka, iyo in kasta oo ay tahay inaysan dhicin, marka uu macmiilku joogo antipodes-ka iyo shuruudahooda ayaa si cad u jira Meel wax lagu hagaajiyo, kama fogaan karo la shaqeynta duuliye otomaatig ah, maahan wax laga xumaado, kaliya waa inaad aragtaa dhinaca wanaagsan, shaqo aan waxbadan kaa rabin adiga iyo macaamilka aad baana ugu qanacsanahay. Sikastaba, shaqadani waa nidaam waxbarasho oo joogto ah waxaana jira waqtiyo qof "dibada ka imanaya" ay tahay inuu yimaado si uu u arko fashilaadayada ama xitaa uu wax uga barto dadka gebi ahaanba ka baxsan waaxda.
Sannadihii aan ahaa Shaxeeye Naqshadeeye iyo Sawire, mid ayaa la macaamilaya noocyo kala duwan oo macaamiil ah, waxaa jira kuwa ku siiya xorriyad hal-abuur leh isla markaana sameeya sharraxaadyo aad u gaar ah, taas oo ay farxad u tahay in la shaqeeyo oo ay jiraan kuwo kale gaar ahaan xilligan oo bixiya adiga a Waxaan shaqeeyaa oo dareemayaa nashqadeeyayaasha, oo ay aad u adagtahay in lala shaqeeyo, waa sababta aan u idhaahdo: MARKASTA MACMIILKU WUXU XAQA YAHAY, marka loo eego hadday tahay Naqshad Sameeyayaasha, halkaas ayaan ku dhiman karnaa inaan sidaa u fikirno maxaa yeelay midawga nashqadeeyayaasha waxaad kula kulmi doontaa caqli kasta oo dareema Coca-Cola ugu dambeysa lamadegaanka…. Laakiin aniga ahaan inaan ahay Designer Graphic waa mid ka mid ah shaqada ugu fiican ee aad heli karto, maxaa yeelay maahan shaqo kali kali ah maskaxduna waxay had iyo jeer raadineysaa inay siiso macmiilka qanacsanaanta A SHAQA WELL DONE !!
Jawaab Luis Valerio Brocca Chavez